घरमा नाच्न पनि नपाउने बेनिशा कसरी बनिन नायिका ? - Gufgaf : Nepal ko entertainment web site : Nepali cinema & Gossip : Nepali comedy : Video & jokes : celebrity interview : Nepali art ,music , manoranjan & more
३२ श्रावण २०७४, बुधबार ११:३८ 28
अभिनेत्री बेनिशा हमालले सिनेमा स्वरबाट सिने क्षेत्रमा डेब्यू गरेकी हुन । मोडलिङ हुदै सिने क्षेत्रमा प्रवेश गरेकी बेनिशाले त्यस अघि चितवनको कालिका एफ.एम. मा रेडियो प्रस्तोताको रुपमा काम गरेकी थिईन । रेडियो संगै उनले च्यानल नेपाल, एन.टि.भी. र एन.टि.भि. प्लसमा कार्यक्रम पनि चलाईन । क्रिटिक्श र दर्शकको माया पाएको सिनेमा कालो पोथीमा पनि बेनिशाको अभिनयलाई धेरैले रुचाएका थिए । कालो पोथी र स्वर बाहेक बेनिशाले ज्यान हाजिर छ, महसुस,लक, मोक्ष जस्ता सिनेमामा काम गरिसकेकी छिन । सिनेमा बाहेक म्यूजिक भिडियोमा सकृय बेनिशाको दुई सिनेमा झया्नाकुटी र ब्लाईन्ड रक्स रिलिजको क्रममा रहेको छ । बेनिशा संगको थप कुराकानी-
सिनेमा हेर्न लुकेर अर्काको घर जान्थ्यौँ
मेरो जन्म नारायणघाट चितवनको गितानगरमा भएको हो । मेरो बाल्यकालमा म एकदमै ज्ञानी र पढ्न रुचाउने बच्चा थिए । मेरो बाल्यकाल अरु बच्चाहरुको जस्तै सामान्य रह्यो । म अरुलाई चकचक गर्ने दुख दिने खालको भने थिईन । घरमा मेरो ममी, ड्याडी, भाई, म र मेरो सानो फुपू हुनुहुन्छ । एस.एल.सी. मा मेरो फस्र्ट डिभिजन आएको थियो । बच्चा बेलामा गाली खाईन्थ्यो । जस्को पनि बुबाआमाले आफ्नो छोराछोरी पढि दिउन भन्ने हुन्छ । कहिले काही खेल्न मन लाग्थ्यो । हामीगाउँ डुल्न पनि जान्थ्यौ । त्यस कारण बाबा ममीबाट निकै गाली खान्थेँ ।
भाई संग मैले त्यस्तो बदमासी गरेको मलाई याद छैन । तर, हामी सानो हुदाँगाउँमा डि.भी.डी. बाट सिनेमा हेर्न चलन थियो । गाउँ भरीको सबै जना एकै ठाँउमा बसेर हिन्दी र नेपाली सिनेमा हेर्ने चलन थियो । त्यहाँ म र बाबु सिनेमा हेर्न लुकीलुकी जान्थ्यौ । त्यहाँ त्यसरी गएर आउँदा गाली खाएको भने सम्झना छ ।
जिवनमा के गर्न चाहान्छौ भन्ने कुरा आफैले बुझ्न निकै जरुरी
विद्यालयमा मैले खासै धेरै साथीहरु बनाईन । मैले धेरै स्कुल फेरेको भएर होला मिल्ने साथी धेरै भएनन । धेरै साथीहरु जम्मा गरेर गफ गरेको पनि मलाई सम्झना नै छैन । म धेरै पढ्नु पर्छ भन्ने खालको थिए । मेरो दिमागमा साथीहरु संग घुम्न जाने, सिनेमा हेर्न, मायामा पर्ने भन्ने थिएन । उमेर संग सगै यो चिज बढ्दै गयो होला ।
म एघारमा पढ्दा मलाई म भन्दा कान्छो एक जनाले लेटर दिएको थियो । त्यो बेलामा म ऊ संग निकै रिसाएको थिए । मेरो लागि त्यो कुरा नौलो पनि थियो । मेरो घरमा बुबा निकै कडा हुनुहुन्थ्यो । मलाई बुबाले नाँच्न पनि दिनुहुन्न थियो । कडा भएको कारण अन्य कुरामा ध्यान कहिल्यै गएन । यो कुरा घरमा थाहा पाउनु भयो भने एकदमै ठूलो तनाब हुन्छ भन्ने डर हुन्थ्यो । कसैले प्रेम प्रस्ताब राख्नु ठूलो कुरा होईन । तर, मेरो घरमा भने त्यो एकदमै ठूलो कुरा हो ।
कतिपय कुरा आफूले सोचेको जस्तो नहुने रहेछ
किशोर अवस्थामा धेरै कुराको उत्सुकता हुन्छ । आफ्नो उत्सुकतालाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुरा आफू माथी भर पर्छ । आफ्नो ईच्छा र चाहनाको बारेमा हामीलाई सहज लाग्ने मान्छे संग हामीले भनि हाल्नुपर्छ । कतिपय कुराहरु हामीले सोचेको र खोजेको जस्तो हुदैन । जस्तै म सग पनि यस्तै भयो । मैले म यो क्षेत्रमा आउँछु भनेर कहिले सोचेको थिईन । मेरो परिबारमा सबै जना निकै कडा हुनुहुन्थ्यो । त्यहीकारण मेरो दिमागमा म अभिनेत्री हुन्छु भन्ने थिएन । तर, म यो क्षेत्रमा आए । यो क्षेत्र मा आएपछि म निकै रमाईरहेको छु । सायद मेरो मनमा कतै थियो होला म अभिनय गर्छु भनेर । त्यो कुरा मेरो परिवारको कारणले दबी रहेको थियो । सायद यो कुरा मैले बुझ्न सकिरहेको थिईन होला । हो हामीले त्यस्ता कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । आखिर हामी जिवनमा के गर्न चाहान्छौ त भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ । कुनै पनि कुराको शुरुवात गर्न ढिला भएको हुदैन । यदी तपाई त्यो कुरा मनै देखि गर्न चाहानु हुन्छ भने त्यो कुराको शुरुवात हामी गर्न सक्छौ । यी मध्ये सबै भन्दा ठूलो कुरा भने हाम्रो परिवार हो । यदी हामी र हाम्रो परिवारको सम्बन्ध राम्रो छ भने सबै कुरा सहज हुन्छ । उहाँहरु संग कुराकानी नगरेँ सम्म हामीलाई उहाँहरुको मनको कुरा थाहाहुदैन । सायद त्यो बेलामा मेरो बुबा कडा नभएको भए म पनि बिग्रन सक्थेँ होला । त्यो कारणले परिवार हाम्रो लागि कहिल्यै पनि गलत हुनुहुदैन । अर्को कुरा जस्तो तपाईलाई सिने क्षेत्रमा आउनु मन छ भने अहिले निकै सहज भएको छ । सात आठ वर्ष अगाडी जब म यो क्षेत्रमाआएको थिए त्यो बेलामा हाम्रो भविष्य के हुन्छ भन्ने थाहा थिएन । त्यो अवस्थामा पनि हामी आएरे काम गर्यौ । यदी हामीलाई एक्टिङ्ग गर्न मन लाग्यो भने सिक्ने ठाउँ थिएन । अहिले सबै कुरा निकै सजिलो भएको छ । यहीकारण हामीले सबै कुरा सिक्ने मौका पाउँछौ । सिक्न चाहने हरुको लागि जहिल्यै ढोकाहरु खुल्ला छन ।